नांगो नाच, यौनधन्दा र राजधानी
मैले मेरो देशका बारेमा गर्व गर्दा अब गौतम बुद्ध, सगरमाथा, एकसिंगे गैंडा, जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश वा जिउँदी देवी कुमारीको नाम लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । हामी अराजकता र उच्छृङ्खलताको सगरमाथा चढिसकेका छौं अब किन फोकटमा अरु अरु बहानामा नेपाली भएकोमा गर्व गर्नु ?! मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको सन्दर्भ मेरो पछिल्लो पटकको काठमाडौं भ्रमणको हो । यहाँले बुझिसक्नु भयो होला, काडमाडौं फगत हाम्रो देशको प्रशासनिक वा राजनैतिक राजधानी मात्र रहेन् । त्यो गुण्डाहरुको राजधानी हो, त्यो आन्दोलनकारीको राजधानी हो, हत्या, हिंसा र लुटपाटमा निमग्न अपराधीहरुको राजधानी हो । अनि राजधानी हो त्यो डान्स बारका नाममा नांगै नाच्ने तरुनी र उनीहरुका स्तन, नितम्ब वा हातको एक पटकको स्पर्शका लागि कामातुर बृद्ध सेठ र साहुहरुको पनि ।
मैले यसपटक यस्ता चार पाँच डान्सबारको भ्रमण गर्न पाएँ कि न जसको कुनै पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनमा विज्ञापन नै देखिन्छन् न त त्यहाँ हुने कर्तुतका बारेमा तिनै पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनका हेडलाइनहरु लेखिन्छन वा वाचिन्छन् ! न त ती ठाउँहरुमा समाजमा शान्ति, अमनचयन र सुव्यवस्थाको ठेक्का पाएका प्रहरीहरुको आँखा नै पुगेको छ ! मलाई राम्ररी थाहा छ, मेरो देशको कानुनले हालसम्म पनि ‘रेडलाइट एरिया’ भनेर कुनै क्षेत्रलाई तोकेको छैन् । र, त्यसकारण पनि म अचम्ममा परेको छु किन प्रहरी विटको ३५–४० मिटर नजिकै चर्का हिन्दी÷अंग्रेजी गीतहरुमा नाचिरहेछन् – नेपाली चेलीहरु नांगो शरीर देखाएर ? तपाइँ कतिपयहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ – ठमेलका अधिकांश गेष्ट हाउसमा नेपाली युवतीहरु वेश्यावृतीमा संलग्न छन् भन्ने कुरा सुनेर । तर यो कुरा सत्य हो । अनि यो पनि सत्य हो कि उनीहरु त्यहाँ भारतीय भूमिमा बेचिएका नेपाली चेलीहरुको भन्दा नारकिय जीवन बिताउन विवश छन् । अनि थाहा छ, यौन धन्दाका लागि एजेन्टको काम गर्न अधिकांश १८ वर्षभन्दा मुनीका बालकहरु परिचालित छन् ! अनि भन्न मन लागेको छ मलाई, माईती नेपाल भन्ने कहाँ हराएको छ– जसले देखेको छैन यो सब राजधानी भित्रैमा ?
आखिर यी घटनाका बारेमा कुनै पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनमा किन समाचारहरु लेखिन्नन्, सुनाइन्नन् र भनिन्नन् ? किन आफ्नै नजिकका स्थानमा चलिरहेको यौन धन्दालाई रोक्नमा प्रहरीहरुको गोडा त्यहाँसम्म पुग्दैनन् ? आखिर किन ?
किनकी, त्यहाँ प्रहरीका हाकीमहरुको शेयर छ, मिडिया हाउस (सञ्चार गृह) का सञ्चालकहरुको शेयर छ अनि राजनैतिक दलका नेताहरुको शेयर छ । अनि यी सब कुराहरु छायाँमा पारिएका छन् । र, नेपाली युवा/युवतीहरुलाई कुबाटोमा हिड्न सरकार आफै प्रेरित गरिरहेको छ । हैन् भने किन यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनन् त सम्बन्धित सरोकारवालाहरू ?